Sinqoba izifo ezinhlobonhlobo ngamakhambi emvelo | News24
Sinqoba izifo ezinhlobonhlobo ngamakhambi emvelo
SINOMTHWALO wokusebenza nomphakathi ukululekana ngezinto ezimbili okokuqala, Ukunakekela impilo nokulwa nezifo ezahlukene njengo Cancer, oshukela nazo zonke izifo.
Okwesibili, ukuvula amathuba emsebenzi uhole ngeviki nangenyanga. Sihlangene njengama networkers athanda amakhambi(products) emvelo organic/natural products eGreytown ku 146 Voortrekker Street Greytown lakuvulwe khona i-office lakwa Norland elisiza ngamakhambi emvelo ezifweni eziningi ezisihluphayo njenge sifo sika shukela nomdlavuza(cancer).
Le nkampani uNorland Health Products esuka e-China esilethele ama products asesize abantu abaningi ngokwezifo, aphinda ashintshe abaningi kwezezimali. Kubalulekile wonke umuntu awasebenzese lama products aphinde azikhuculule ngaphakathi ngalamakhambi emvelo awenziwe nge stem cell abukhali ukulwa nezifo ezahlukene.
Siyaye sichaze kabanzi e-hhovisi lethu lakwa Norland eGreytown sikhombise futhi lokhu okuthiwa i-demonstration. Lenkampani ine scan sokuhlola impilo bese ikhipha ama products angakusiza kuleyo nkinga yakho. Kunama capsules engifuna ukufundisa ngawo kuleli viki okuthiwa yi-GI anamandla kakhulu. Siyafisa wonke umuntu awathole lama capsules ayavuselela izicubu zomzimba yethu.
Ngemibuzo sivakashele e-hhovisi lakwa Norland Health Products ku 146 Voortrekker Street, Greytown noma usishayele ucingo kulezinombolo: 076 346 5433, 072 149 6534 noma 082 518 0042. Kunabaluleki bamahhala abakhona e-office lakwa Norland.
Greytown Norland Staff